Mikaela (arikanjely) - Wikipedia
I Mikaela manjera an'i Satana, nataon'i Guido Reni, taona 1536
I Mikaela na Misely dia isan’ireo anjely lehibe na arikanjely, toa an'i Gabriela sy i Rafaela, izay resahina ao amin’ny fivavahana jiosy sy kristiana ary silamo.
2 Ao amin’ny finoana jiosy
2.1 Araka ny boky kanonika
2.2 Araka ny lovantsofina sy ny fivoasana sasany
3 Ao amin’ny finoana kristiana
3.1 Ao amin’ireo boky kanonika
3.2 Araka ny lovantsofina na ny fivoasana isan’antokom-pinoana
3.2.1 Araka ny fiangonana katolika romana
3.2.2 Araka ny fiangonana katolika ortodoksa
3.2.3 Araka ny fiangonana protestanta
3.2.4 Araka ny Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito
3.2.5 Araka ny Vavolombelon’i Jehovah.
3.2.6 Araka ny Olomasin’ny Andro Farany
4 Ao amin'ny fivavahana silamo
4.1 Araka ny Kor'any
4.2 Araka ny lovantsofina taty aoriana
Ny anarana hoe Mikaela dia avy amin’ny teny hebreo hoe מיכאל / Mîkhâ'êl izay midika hoe “iza no sahala amin’Andriamanitra”. Ny hoe Misely, izay anoratana sy anononana io anarana io ao amin’ny Baiboly katolika amin’ny teny malagasy, dia io anarana hebreo io ihany fa noraisina avy amin’ny fanononana frantsay (Michel). Ny hoe Mikaela kosa dia nalain'ny Protestanta tamin'ny fanononana anglisy.
Ao amin’ny finoana jiosy[hanova | hanova ny fango]
Araka ny boky kanonika[hanova | hanova ny fango]
Resahina matetika ao amin’ny Testamenta Taloha ny anjely Mikaela. Izy no miseho rehefa miresaka amin’ny olombelona Andriamanitra sady alefany ho iraka mitondra vaovao.
I Mikaela no lohan’ireo anjely araka ny Bokin’i Daniela sady anjely mpiambina an’i Israely (Dan. 10.13-21). Andriamanitra sy i Gabriela dia manambara amin’i Daniela (Dan. 12.1) fahitana ny amin’ny andro farany izay ahitana ny anjely Mikaela mitsangana mba hanangana ny maty sasany ho amin’ny fiainana (paradisa) ary ny hafa ho amin’ny fahafatesana amin’ny fotoana tsy voafetra.
Araka ny lovantsofina sy ny fivoasana sasany[hanova | hanova ny fango]
Ireo Eseniana dia mihevitra an’i Mikaela ho mpisoron-dehibe any an-danitra. Ao amin’ny Talmud, ny fifandraisany amin’ireo anjely any an-danitra dia mitovy amin’ny fifandraisan’ny mpisoron-dehibe amin’i Israely eto an-tany.
Araka ny lovantsofina jiosy, i Mikaela dia mpiahy an’i Israely, sady indraindray miady amin’ny anjely Samaela (Devoly na Satana), ilay mpiampanga an’i Israely. Ny maha mpifahavalo an’i Mikaela sy i Samaela dia efa hatramin’ny nanjerana an’i Samaela avy any an-danitra. Notanan’i Samaela ny elatr’i Mikaela mba hisintomany azy hiaraka aminy ho latsaka any ambany nefa novonjen’Andriamanitra i Mikaela. Hoy i Mikaela tamin’i Satana rehefa niady ny fatin’i Mosesy hoe: “Ho tsinin’Andriamanitra anie ianao”
Io finoana an’i Mikaela ho mpiaro ny Jiosy io dia nanjary zava-dehibe ka na dia tsy nankasitrahin’ireo raby ny fanaovana ny anjely ho mpanelanelana an’Andriamanitra sy ny olony, dia lasa nanana anjara toerana manokana teo amin’ny fanompoam-pivavahana jiosy i Mikaela.
Ao amin’ny finoana kristiana[hanova | hanova ny fango]
Ao amin’ireo boky kanonika[hanova | hanova ny fango]
I Masindahy Mikaela Lehibe, nataon'i Raffaello Sanzio, taona 1518
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly i Mikaela dia heverina ho ilay mpanao lalàna niresaka amin’i Mosesy tao amin’ny tendrombohitra Sinay (Asa 7.38).Ao amin’ny Epistilin’i Joda (Joda 1.9) dia voalaza fa miady amin'ny Devoly i Mikaela mba hahazo ny fatin’i Mosesy.
Araka an'i Paoly, ao amin’ny Epistily ho an’ny Tesaloniana (1Tes. 4.16) dia misy anjely tsy voatonona anarana nanambara fa i Jesoa dia hidina avy any an-danitra rehefa maneno ny feon’ilay arikanjely. Misy mihevitra fa i Mikaela izany arikanjely izany.
Ao amin’ny fahitàn’i Jaona ao amin’ny Apokalipsy (Apo. 12.7-9), i Mikaela sy ireo anjeliny dia nanjera an’ilay Dragona (dia i Satana izany) sady nanala azy miaraka amin’ireo anjely ratsiny avy ao an-danitra.
Araka ny lovantsofina na ny fivoasana isan’antokom-pinoana[hanova | hanova ny fango]
Araka ny fiangonana katolika romana[hanova | hanova ny fango]
Ny arikanjely Mikaela manafaka ny fanahin'ny maty avy ao amin'ny Afo fandiovana, nataon'i Jacopo Vignali, taonjato faha-17.
I Mikaela (na Masindahy Misely) dia manana anjara asa efatra: Izy no mpitarika ny tafik’Andriamanitra izay mandresy ny herin’ny Afobe sady anjely modely amin’ny ady ara-panahy. I Md Misely no ilay anjelin’ny fahafatesana izay mitondra ny fanahin’ny maty mankany an-danitra. Mandanja amin’ny mizàna ny fanahin’ny olombelona koa i Md Misely amin’ny fitsarana farany. Izy no mpiaro manokana ny Vahoaka Voafidy tao amin’ny Testamenta Taloha fa mpiaro ny Eglizy kosa izy amin’izao no mpiaro tanàna maro sady mpiaro ny tafika tamin’ny Andro Antenantenany (Moyen Age). Misy noho izany ny vavaka atao hangatahana ny fiarovan’i Md Misely sy ny sapole amin’ny anarany.
Araka ny fiangonana katolika ortodoksa[hanova | hanova ny fango]
Mangataka amin’i Mikaela sy amin’i Gabriela ny Ortodoksa mba hahazo fiarovana aminy. Tanàna maro any Atsinanana no manana an’i Mikaela ho mpiaro manokana. Maro ireo hiram-pivavahana andrenesana ny anaran’i Mikaela sy ireo sarivongana maneho azy. Mpanelanelana masina koa i Mikaela ka mitondra ny vavaky ny mpino eo anatrehan’Andriamanitra.
Araka ny fiangonana protestanta[hanova | hanova ny fango]
Araka an’i John A. Lees, izay mampahatsiahy ny voalazan’i Hengstenberg, ao amin’ny International Standard Bible Encyclopedia dia izao: “Ireo manam-pahaizana Protestanta tany amboalohandohany tany dia matetika manao an’i Mikaela ho i Kristy talohan’ny nahatongavany ho nofo, ka manohana ny heviny, tsy amin’ny fampifanilana ny “zaza” sy ny arikanjely ao amin’ny Apo. 12.1-17, fa kosa ao amin’ny toetra mampiavaka azy araka an’i Daniela.” I Charles Haddon Spurgeon dia nanambara fa i Jesoa dia i Mikaela, “ilay Arikanjely tokana”, ary koa fa izy no Zanak’Andriamanitra. Ny arikanjely amin’i Spurgeon dia lohan’ny anjely fa tsy anjely lehibe ka saika mitovy amin’ny hoe Mpitarika ny marobe na Komandin’ny marobe (Dan. 18.11).
Ao amin’ny Fiangonana Anglikana, ilay pretra Robert Clayton (maty tamin’ny 1758) dia nilaza fa i Mikaela dia tsy inona fa ny Teny ary i Gabriela dia ny Fanahy Masina. Niteraka fiampangana sy fanenjehan’ny fanjakana azy izany fiheverany izany.
Ny Adventista sy ny Vavolombelon'i Jehovah amin'izao no mbola mitazona izany fiheverana an'i Mikaela ho i Jesoa izany. Ny Protestanta ankehitriny dia tsy manaiky ny fisian’ny olo-masina na zavaboary hafa mpanelanelana ny mpino amin’Andriamanitra sady tsy manao an'i Mikaela ho i Jesoa Kristy. Roa ihany ny arikanjely eken’ny Protestanta, dia i Mikaela sy i Gabriela. Na i Gabriela aza, izay tsy voalaza fa arikanjely ao amin'ny Baiboly, dia heverina fa anjely tsotra ihany.
Araka ny Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito[hanova | hanova ny fango]
Ny Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito, izay nandova ny fiheveran'ny Protestanta tany aloha, dia mino fa i Mikaela dia anarana hafa ho an’ilay Zanaka mandrakizain’ny Ray, dia ilay Kristin’ny lanitra, sady anarana hafan’ny Tenin’Andriamanitra (Jao. 1) alohan’ny nahatongavany ho nofo ao amin’i Jesoa. Ny hoe "Arikanjely" (izay midika hoe "Lohan’ny Anjely", "mpitondra teny ambony") dia ny toeran’ny maha mpitarika ny Tenin’Andriamanitra, sady fisiana tsy noforonina no tsy anjely noforonina, sady ilay nahariana ny zava-drehetra. Ny anarana hoe Mikaela dia mambara ny hoe “ilay iray izay Andriamanitra” araka ny fahazoan'ny Adventista ny ao amin’ny Apokalipsy (Apo. 12.7-9) hoe "iza no mitovy amin'Andriamanitra". I Mikaela no nitarika ny tafika ka naharava an’i Jeriko, araka ny fivoasany ny ao amin’ny Bokin’i Josoa (Jos. 5.14). I Paoly sy i Jaona dia heveriny fa manana izany hevitra izany (1Tes. 4.13-18; Jao. 5.25-29). Na dia izany aza dia mino ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa (na i Mikaela) ny Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito.
Araka ny Vavolombelon’i Jehovah.[hanova | hanova ny fango]
Ny Vavolombelon’i Jehovah dia manao ny hoe Mikaela ho anarana hafan’i Jesoa Kristy any an-danitra, tamin’ny fisiany talohan’ny nahaterahany sy taorian’ny nitsanganany ho velona. Milaza izy ireo fa ny mpanoritra ao amin’ny Epistilin’i Joda (Joda 9) izay manondro an’i “Mikaela ilay arkanjely”, dia manao an’i Mikaela ho ilay arikanjely tokana. Mihevitra koa izy ireo fa ny hoe Mikaela dia mitovy hevitra amin’ny hoe Kristy, izay voaresaka ao amin’ny Tesaloniana (1Tes. 4.16). Marihina fa tsy mitovy tanteraka ireo dikan-teny ao amin'ny Baibolin'ny Vavolombelona sy ny dikan-teny ao amin'ny Baiboly hafa. Mino ny Vavolombelon'i Jehovah fa ny anjara asa ambony indrindra sahanin’i Mikaela ao amin’ny Bokin’i Daniela (Dan. 12.1) sy ao amin'ny Apokalipsy (Apok. 12. 7; 14.15) dia mitovy amin’ny anjara asan’i Jesoa.
Araka ny Olomasin’ny Andro Farany[hanova | hanova ny fango]
Ny Olomasin'ny Andro Farany (izay atao hoe Môrmôna) dia mino fa i Mikaela dia tsy iza fa i Adama, ilay Fahagola ao amin'ny Bokin'i Daniela (Dan.7.9), dia andriandahy, sady Rain’ny fianakaviamben’ny olombelona. Ary koa, mihevitra izy ireo fa i Mikaela dia manampy an’i Jehovah (ilay endrik’i Jesoa Kristy any an-danitra) teo amin’ny famoronana izao tontolo izao teo ambany fitarihan’Andriamanitra Ray sady nanjera an’i Satana avy any an-danitra.
Ao amin'ny fivavahana silamo[hanova | hanova ny fango]
Araka ny Kor'any[hanova | hanova ny fango]
Ny Arikanjely Mikaila, taona 1717
Ny anjely Mikaela (Mika’îl na Mikâla) dia hita indray mandeha ao amin’ny Kor'any (2.98) izay maneho azy eo anatrehan’ny anjely Gabriela (Jibril na Jibrail) izay miara-mandanja aminy ireo asa vitan’ny olombelona. “Na iza na iza fahavalon’Andriamanitra sy ireo anjeliny sy ireo irany sy i Jibrily ary i Mikhaily! Dia Andriamanitra tenany no ho fahavalon’ny tsy mino.” (Kor'àny 2.98) Misy koa ireo mpino silamo izay mihevitra fa ilay nitsidika an’i Ibrahima (na Abrahama) voalaza ao amin’ny Kor'àny 11. 69 dia tsy iza fa ny anjely Mikhaily.
Araka ny lovantsofina taty aoriana[hanova | hanova ny fango]
Araka ny lovantsofina silamo taty aoriana, i Mikaela no miandraikitra ny asa famelombelomana ao amin’ny olona ny fahatsiarovana ny tantara efa lasa. Anjely tian’Andriamanitra izy nefa ireo teny enti-milaza ny toetrany sy ny asany manokana araka ny lovatsofina dia tsy tena mazava tsara. I Al-Qazwini dia milaza fa mizara hatsaram-panahy sy mitarika ny fitomboan’ireo zavaboary ho amin’ny fahatanterahana io anjely io. Ao amin’ny lovantsofina miozolmana sasany, i Mikaela dia mifehy ny ranon’orana sy ny rivotra sady manome ny zavaboary manan’aina, –indrindra fa ny olombelona, na ny mino na ny tsy mino – fahombiazana, sakafo na fahalalana. Ho an’ny sasany kosa, lehiben’ireo anjely ao amin’ny Lanitra faha-6 sady iray amin’ireo mpitondra ny sezafiandrianan’Andriamanitra i Mikaela. Ny hafa indray dia mampitovy azy amin’i Azraela (na Izrail), iray amin’ireo anjely telo izay miseho amin’ny endrika zatovo tsara tarehy nitsidika an’i Abrahama (na Ibrahim) sy i Lota (na Lût).
↑ 1,0 et 1,1 "Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao; ary hisy andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany; ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky." (Dan. 12.1 -- Ny Baiboly)
↑ "Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany an-efitra mbamin'ny Anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika." (Asa 7.38 – Ny Baiboly).
↑ "Fa Mikaela arikanjely aza, raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sahy niteny ratsy hahameloka azy, fa hoy izy: "Hananatra anao anie Jehovah".(Joda 1.9 – Ny Baiboly).
↑ 4,0 et 4,1 "Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin i Kristy no hitsangana aloha" (1Tes. 4.16 – Ny Baiboly)
↑ 5,0 5,1 et 5,2 "Ary nisy ady tany an-danitra: Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona; ary ilay dragona mbamin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy." (Apo. 12.7-9 – Ny Baiboly)
↑ "Eny, nihalehibe izy ka dia niady tamin'ny Komandin'ireo maro be, ary nesorina taminy ny fanatitra isan'andro, ary ny fitoerana masina noravana." (Dan. 8.11 -- Ny Baiboly)
↑ "Dia hoy Izy: Tsia; fa Izaho dia Komandin'ny miaramilan'i Jehovah ka tonga atỳ ankehitriny. Dia niankohoka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe: Inona no holazainao amin'ny mpanomponao, Tompokolahy ?" (Jos.5.14 -- Ny Baiboly)
↑ "satria ny Tompo mihitsy amin’izay no hidina avy any an-danitra ka hanome baiko mafy amin’ny feon’arkanjely sady hihazona ny trompetran’Andriamanitra. Koa izay maty ao amin’i Kristy no hitsangana voalohany" (1Tes. 4.16 -- Ny Soratra masina, Fandikan-tenin'ny Tontolo Vaovao).
↑ "Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra." (Apo. 14.17 -- Ny Baiboly)
↑ "Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny Fahagola no nipetraka teo, ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala, ary ny volon-dohany toy ny volon'ondry madio; ny seza fiandrianany dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra." (Dan. 7.9 -- Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikaela_(arikanjely)&oldid=818885"
Voaova farany tamin'ny 21 Aogositra 2018 amin'ny 15:51 ity pejy ity.